Bible—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
6 Bible no kyerɛw dii mfirihyia 1,600. N’akyerɛwfo no antra ase wɔ bere koro mu. Na ɛsono wɔn mu biara dibea a ɔwɔ wɔ asetra mu. Ná ebinom yɛ akuafo, mpataayifo, ne nguanhwɛfo. Ná afoforo yɛ adiyifo, atemmufo, ne ahemfo. Ná Asɛmpa kyerɛwfo Luka yɛ oduruyɛfo. Ɛmfa ho sɛ na ɛsono adwuma a na Bible akyerɛwfo no mu biara yɛ no, emu nsɛm no hyia fi mfiase kosi awiei.*
9 Bible ne abakɔsɛm nso hyia, na ɛyɛ nea yebetumi de yɛn ho ato so. Emu nsɛm no ka nneɛma pɔtee ho asɛm. Ɛnyɛ nnipa din nko na ɛbobɔ na mmom ɛkyerɛ abusua a nnipa no fi mu nso.# Ná Bible akyerɛwfo no yɛ anokwafo, wɔkaa wɔn ankasa ne wɔn man sintɔ ne nkogudi ho asɛm. Wiase abakɔsɛm akyerɛwfo nte saa, wɔntaa nka wɔn ankasa nkurɔfo nkogudi ho asɛm. Sɛ nhwɛso no, ɔkyerɛwfo Mose gyee ne mfomso a anibere wom a ɔyɛe a wɔkaa n’anim denneennen wɔ ho no toom wɔ Bible mu nhoma a ɛne Numeri no mu. (Numeri 20:2-12) Wɔntaa nhu nokwaredi a ɛte saa wɔ abakɔsɛm kyerɛwtohɔ afoforo mu, nanso yehu wɔ Bible mu efisɛ ɛyɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ.
12 Bible nnyinasosɛm bi fa abusua asetra, adwuma ho suban pa, ne yɛne afoforo ntam abusuabɔ ho. Nnyinasosɛm a ɛwɔ Bible mu fa nnipa nyinaa ho, na emu afotu so wɔ mfaso bere nyinaa. Onyankopɔn asɛm a ɔnam odiyifo Yesaia so kae no ka nyansa a ɛwɔ Bible mu ho asɛm tiawa sɛ: “Me [Yehowa, NW ], wo Nyankopɔn, mene nea ɔkyerɛ wo nea eye ma wo.”—Yesaia 48:17.
13 Nkɔmhyɛ pii wɔ Bible mu, na emu bebree anya mmamu dedaw. Susuw nhwɛso bi ho hwɛ. Yehowa nam odiyifo Yesaia a ɔtraa ase wɔ afeha a ɛto so awotwe A.Y.B. mu so hyɛɛ nkɔm sɛ wɔbɛsɛe Babilon kurow no. (Yesaia 13:19; 14:22, 23) Ɔkyerɛɛ ɔkwan pɔtee a eyi bɛfa so aba. Na asraafo a wɔrebɛsɛe kurow no bɛma Babilon kurow no asubɔnten no ayow, na wɔakɔ kurow no mu a obiara ne wɔn nko. Anso hɔ ara. Yesaia nkɔmhyɛ no bɔɔ ɔhene a na ɔbɛko adi Babilon so a ɔne Kores no mpo din.—Yesaia 44:27-45:2.
16 Wɔka faa Babilon ho sɛ: “Obi rentra mu da biara da, na obi renkɔtra hɔ, awo ntoatoaso a edidi so mu, na Arabiani bi rensi ntamadan hɔ, na nguanhwɛfo nso remma wɔn mmoa mmutuw hɔ.” (Yesaia 13:20) Ɛnyɛ kurow no sɛe nko ho asɛm na na ɛwɔ nkɔmhyɛ yi mu. Ɛdaa no adi sɛ na wɔrenkyekye Babilon bio. Asɛm yi mmamu ho adanse wɔ hɔ a wubetumi ahu. Tete Babilon amamfõ a efi Iraq ahenkurow Baghdad anafo fam kɔ hɔ yɛ kilomita 80 no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ asɛm a Yehowa nam Yesaia so kae no abam: “Mede ɔsɛe prae mapra no.”—Yesaia 14:22, 23.%
17 Sɛ yesusuw sɛnea Bible yɛ nhoma a emu nkɔmhyɛ bam no ho a, ɛhyɛ yɛn gyidi den, ɛnte saa? Nokwasɛm ne sɛ, sɛ Yehowa Nyankopɔn ama nkɔm a ɔhyɛe wɔ bere bi a atwam no abam a, ɛnde ɛsɛ sɛ yenya ahotoso koraa sɛ ɔbɛma paradise asase ho bɔhyɛ no nso abam. (Numeri 23:19) Nokwarem no, yɛwɔ “ade a egyina daa nkwa anidaso a Onyankopɔn a ontumi nni atoro no ahyɛ ho bɔ fi teteete no so.”—Tito 1:2.^
Bible yɛ Onyankopɔn asɛm ma enti ɛyɛ nokware na yebetumi de yɛn ho ato so.— 2 Timoteo 3:16.
* Ɛwom sɛ nnipa bi ka sɛ nsɛm a ɛwɔ Bible afã bi ne afã foforo nhyia de, nanso nsɛm a ɛtete saa a wɔka no nni nnyinaso. Hwɛ nhoma, The Bible—God’s Word or Man’s? (Bible—Onyankopɔn Asɛm Anaasɛ Nnipa Asɛm) a Yehowa Adansefo atintim no ti 7.
# Sɛ nhwɛso no, hwɛ abusua a Yesu fi mu a wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ Luka 3:23-38 no.
% Sɛ wopɛ Bible nkɔmhyɛ ho nsɛm pii a, hwɛ Amansan Nhoma, nhomawa a Yehowa Adansefo atintim no kratafa 27-9.
^ Babilon sɛe no yɛ Bible nkɔmhyɛ a abam no ho nhwɛso biako pɛ. Nhwɛso foforo bi ne Tiro ne Niniwe sɛe no. (Hesekiel 26:1-5; Sefania 2:13-15) Afei nso, Daniel nkɔmhyɛ no kaa wiase ahemman a na ebedi Babilon akyi aba no ho asɛm. Ebi ne Media ne Persia ne Hela. (Daniel 8:5-7, 20-22) Sɛ wopɛ Mesia no ho nkɔmhyɛ pii a enyaa mmamu wɔ Yesu Kristo so ho nkyerɛkyerɛmu a, hwɛ Nkekaho no.